ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်းနားရတဲ့သူတွေ ကိုယ်ပိုင်အခွေထွက်ပြီးမှ ပွဲတွေလိုက်ဆိုသင့်တယ် ဆိုတဲ့ ဥာဏ်လင်းအောင် – XB Media Myanmar
ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်းနားရတဲ့သူတွေ ကိုယ်ပိုင်အခွေထွက်ပြီးမှ ပွဲတွေလိုက်ဆိုသင့်တယ် ဆိုတဲ့ ဥာဏ်လင်းအောင်
သူငယ်ချင်းသီချင်းလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေကြားထဲ ပျံ့နှံ့လာပြီး ပထမဆုံးတစ်ခွေနဲ့တင် အောင်မြင်သွားခဲ့တဲ့ ဥာဏ်လင်းအောင်ကတော့ ယခုနောက်ပိုင်းမှာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနည်းသွားသလောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရော့ခ်ဂီတဘက်ကို ပိုမိုအားသန်တဲ့ ဥာဏ်လင်းအောင်တစ်ယောက် သူဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာတွေကို ချပြတဲ့အချိန်မှာတော့ အင်မတန်ပြောင်မြောက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဥာဏ်လင်းအောင်ဟာ အေးချမ်းပြီးနားလည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ ချစ်သူဘဝလေးကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားပြီးတော့ ယနေ့အချိန်ထိ လူပျိုကြီးဘဝနဲ့ ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော် ဥာဏ်လင်းအောင်က ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးပြီးနောက်မှာတော့ ရှိုးပွဲတွေမှာ လိုက်သီဆိုရင် မိမိကိုယ်ပိုင်သီချင်းခွေထွက်ရှိပြီးမှ သီဆိုသင့်တယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတူ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖန်တီးသူ သူ့အနေနဲ့ သူများသီချင်းတွေကို လိုက်ဆိုပြီးတော့ အကျိုးအမြတ်ရယူနေတာ မဖြစ်သင့်ဘူးထင်တယ်လို့ ဆိုပါသေးတယ်။
ဥာဏ်လင်းအောင်ကတော့ သူ့ရဲ့သီချင်းတွေကို အသုံးမပြုဖို့ ပြောထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
” ပြိုင်ပွဲဆိုတာတောင်မှ ပြိုင်ပွဲတွေတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုမတူဘူး။ လူကိုပေါက်အောင်လုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲရှိတယ်။ သီချင်းပေါက်အောင်လုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေရှိတယ်။ သူများသီချင်းနဲ့ ပေါက်သွားတဲ့အဲလိုပြိုင်ပွဲတွေ ဒါပေမယ့် ဒါက သူတို့ တစ်ကဏ္ဍပေါ့နော်။ အပြင်မှာကျတော့ ပွဲတွေဆိုတယ် ကျတော်ဖြစ်ချင်တာ လုပ် ခွေထွက်ပြီးမှ ပွဲဆိုလို့ရမယ် ဒါကျတော်တွေးထားတာပေါ့နော် ပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပြီးတဲ့သူတွေက အပြင်မှာ ဆိုရင် အခွေထွက်ပြီးမှဆိုတာ ပိုသင့်တော်မယ်လို့ ကျတော်ထင်တယ်ပေါ့နော်။ ”
“အခုဟာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပွဲတစ်ပွဲပြီးသွားရင် နယ်ပွဲကအစ ပိစိကွေးသေးသေးလေးတွေကအစ ဝင်းနားရတဲ့သူခေါ်တယ်။ ဆိုတယ်။ အဆိုတော်ကြီးတွေပါတဲ့သီချင်းတွေ သူတို့ဆိုတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် အဲ့အဆိုတော် ပါပါ မပါပါ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အကျိုးအမြတ်ရသွားတယ် ဒီသီချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့။ ဒီသီချင်းကိုဖန်တီးလာရတဲ့သူက သူ့ဘဝမှာအများကြီးပေးဆပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော် အဆိုတော်ကြီးက သူ့ဘာသူ ဒီတစ်ပုဒ်ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက် သူကတော့ ပွဲတိုင်းမှာ ဒီသီချင်းဆိုတယ် အဲလူရဲ့သီချင်းဆိုတယ်။ ပိုက်ဆံတွေယူတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါသူ့သမိုင်းပါ။ မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော် ကိုယ်ဆိုလည်း ကိုယ်ခံစားရမှာပဲ သီချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်။ သီချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်။ သီချင်းမှာလည်းဆန်းရှိတယ်။ လူနဲ့မတူဘူး သီချင်းဆန်းက။ ကိုယ့်သီချင်းတွေ အရင်ကယူဆိုတာတွေလည်း အရင်တုန်းကတော့ ကြုံဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျတော်ပြောထားတာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ပြိုင်ပွဲမှာ ဆိုတာက အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ ပြိုင်ပွဲပြီးလို့ အပြင်မှာပွဲတွေမှာဆိုတာက ကာယကံရှင်တော့မသိဘူး ကျတော်တော့မခံစားနိုင်ဘူး” လို့ MC အင်တာဗျူးကနေပြီးတော့ ဖြေကြားပြောဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဥာဏ်လင်းအောင် ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထဲမှာပဲ တွန်းအားဆိုတဲ့တစ်ကိုယ်တောအခွေထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ….ပရိသတ်ကြီးကရော ဥာဏ်လင်းအောင်အမြင်နဲ့ ထပ်တူကျပါလား? ပရိသတ်ကြီးကရော ဘယ်လို မြင်သလဲဆိုတာကို မှတ်ချက်လေးပေးပြီး မျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနော်။
Photos – Nyan Lin Aung
သူငယျခငျြးသီခငျြးလေးနဲ့ ပရိသတျတှကွေားထဲ ပြံ့နှံ့လာပွီး ပထမဆုံးတဈခှနေဲ့တငျ အောငျမွငျသှားခဲ့တဲ့ ဉာဏျလငျးအောငျကတော့ ယခုနောကျပိုငျးမှာ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှနေညျးသှားသလောကျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ရော့ချဂီတဘကျကို ပိုမိုအားသနျတဲ့ ဉာဏျလငျးအောငျတဈယောကျ သူဖနျတီးထားတဲ့ အနုပညာတှကေို ခပြွတဲ့အခြိနျမှာတော့ အငျမတနျပွောငျမွောကျနတောကို တှရေ့ပါတယျ။
ဉာဏျလငျးအောငျဟာ အေးခမျြးပွီးနားလညျမှုအပွညျ့ရှိတဲ့ ခဈြသူဘဝလေးကို ဖနျတီးတညျဆောကျထားပွီးတော့ ယနအေ့ခြိနျထိ လူပြိုကွီးဘဝနဲ့ ရပျတညျနဆေဲဖွဈပါတယျ။ အဆိုတျော ဉာဏျလငျးအောငျက ပွိုငျပှဲပွီးဆုံးပွီးနောကျမှာတော့ ရှိုးပှဲတှမှော လိုကျသီဆိုရငျ မိမိကိုယျပိုငျသီခငျြးခှထှေကျရှိပွီးမှ သီဆိုသငျ့တယျလို့ မှတျခကျြပေးပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ ထို့အတူ သီခငျြးတဈပုဒျကို ဖနျတီးသူ သူ့အနနေဲ့ သူမြားသီခငျြးတှကေို လိုကျဆိုပွီးတော့ အကြိုးအမွတျရယူနတော မဖွဈသငျ့ဘူးထငျတယျလို့ ဆိုပါသေးတယျ။
ဉာဏျလငျးအောငျကတော့ သူ့ရဲ့သီခငျြးတှကေို အသုံးမပွုဖို့ ပွောထားတာလညျးဖွဈပါတယျ။
” ပွိုငျပှဲဆိုတာတောငျမှ ပွိုငျပှဲတှတေဈခုနဲ့ တဈခုမတူဘူး။ လူကိုပေါကျအောငျလုပျတဲ့ပွိုငျပှဲရှိတယျ။ သီခငျြးပေါကျအောငျလုပျတဲ့ပွိုငျပှဲတှရှေိတယျ။ သူမြားသီခငျြးနဲ့ ပေါကျသှားတဲ့အဲလိုပွိုငျပှဲတှေ ဒါပမေယျ့ ဒါက သူတို့ တဈကဏ်ဍပေါ့နျော။ အပွငျမှာကတြော့ ပှဲတှဆေိုတယျ ကတြျောဖွဈခငျြတာ လုပျ ခှထှေကျပွီးမှ ပှဲဆိုလို့ရမယျ ဒါကတြျောတှေးထားတာပေါ့နျော ပွိုငျပှဲမှာပွိုငျပွီးတဲ့သူတှကေ အပွငျမှာ ဆိုရငျ အခှထှေကျပွီးမှဆိုတာ ပိုသငျ့တျောမယျလို့ ကတြျောထငျတယျပေါ့နျော။ ”
“အခုဟာ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ပှဲတဈပှဲပွီးသှားရငျ နယျပှဲကအစ ပိစိကှေးသေးသေးလေးတှကေအစ ဝငျးနားရတဲ့သူချေါတယျ။ ဆိုတယျ။ အဆိုတျောကွီးတှပေါတဲ့သီခငျြးတှေ သူတို့ဆိုတယျလေ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့အဆိုတျော ပါပါ မပါပါ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ အကြိုးအမွတျရသှားတယျ ဒီသီခငျြးတဈပုဒျနဲ့။ ဒီသီခငျြးကိုဖနျတီးလာရတဲ့သူက သူ့ဘဝမှာအမြားကွီးပေးဆပျခဲ့ရတယျပေါ့နျော အဆိုတျောကွီးက သူ့ဘာသူ ဒီတဈပုဒျရဲ့တနျဖိုးကဘယျလောကျ သူကတော့ ပှဲတိုငျးမှာ ဒီသီခငျြးဆိုတယျ အဲလူရဲ့သီခငျြးဆိုတယျ။ ပိုကျဆံတှယေူတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါသူ့သမိုငျးပါ။ မဖွဈသငျ့ဘူးပေါ့နျော ကိုယျဆိုလညျး ကိုယျခံစားရမှာပဲ သီခငျြးတဈပုဒျရဲ့တနျဖိုးပေါ့နျော။ သီခငျြးတဈပုဒျရဲ့တနျဖိုးရှိတယျ။ သီခငျြးမှာလညျးဆနျးရှိတယျ။ လူနဲ့မတူဘူး သီခငျြးဆနျးက။ ကိုယျ့သီခငျြးတှေ အရငျကယူဆိုတာတှလေညျး အရငျတုနျးကတော့ ကွုံဖူးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကတြျောပွောထားတာတှလေညျးပါတယျပေါ့နျော။ ဒါပမေယျ့ ပွိုငျပှဲမှာ ဆိုတာက အကွောငျးမဟုတျဘူး။ ပွိုငျပှဲပွီးလို့ အပွငျမှာပှဲတှမှောဆိုတာက ကာယကံရှငျတော့မသိဘူး ကတြျောတော့မခံစားနိုငျဘူး” လို့ MC အငျတာဗြူးကနပွေီးတော့ ဖွကွေားပွောဆိုသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဉာဏျလငျးအောငျ ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှဈထဲမှာပဲ တှနျးအားဆိုတဲ့တဈကိုယျတောအခှထှေကျရှိထားတာဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရေ….ပရိသတျကွီးကရော ဉာဏျလငျးအောငျအမွငျနဲ့ ထပျတူကပြါလား? ပရိသတျကွီးကရော ဘယျလို မွငျသလဲဆိုတာကို မှတျခကျြလေးပေးပွီး မြှဝပေေးခဲ့ပါဦးနျော။